» चितवनमा क्यान्सरको औषधि अभाव
चितवनमा क्यान्सरको औषधि अभाव
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १०:०३ प्रकाशित
चितवन – चितवनमा क्यान्सरका बिरामीहरुले प्रयोग गर्ने औषधि अभाव भएको छ । औषधि अभाव हुन थालेपछि उपचारमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल वरपरका फार्मेसी सन्चालकहरूले भारतमा नआएकाले औषधि अभाव भएको बताएका छन् । चिकित्सकहरुले पनि रगत, फोक्सो, स्तन, मिर्गौलालगायत जुनसुकै क्यान्सरमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव भएको बताएका छन् ।
वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी विभागका चिकित्सक डा. गुरु शाहले रक्त क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने ब्लुमाइसिन, ड्याक्टिनोमाइसिन, भिनक्रिस्टिन, इमाटिनिब, भिनब्लोसिन, लेनोलिडोनाइड अभाव भएको बताए ।
यस्तै पाठेघरको क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने बिभोसिजिम्याप, फोक्सोको क्यान्सरका बिरामीले खाने इभरिलोमस, स्तनको क्यान्सर बिरामीले खाने ट्याक्सिफेन, मिर्गौला क्यान्सरका बिरामीका लागि दिइने सोलिटिब, विभिन्न क्यान्सरमा प्रयोग गरिने मेथोटेक्जेट, डाकारबाजिन जस्ता औषधि अभाव भएको बताए ।
डा. शाहका अनुसार बिरामीलाई चढाइने केमोको समेत अभाव हुन थालेको छ । विगत १५ दिनदेखि यस्ता औषधिको अभाव हुन थालेको डा. शाहले बताए । लकडाउनको समयमा समेत क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक २५० जना क्यान्सर तथा शंकास्पद बिरामी आउने गरेका छन् । साधारण अवस्थामा दैनिक ६५० जना बिरामी अस्पतालमा आउने गरेका थिए ।
क्यान्सर गेट अगाडिको बिमल फार्मेसीका सञ्चालक बिमल लामिछानेले क्यान्सरका बिरामीहरुलाई नियमित रूपमा चाहिने औषधिको अभाव भएको बताए ।
क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने औषधि महँगासमेत हुन्छन् । अधिकांश औषधि भारतमा उत्पादन हुन्छन् । ती औषधि भारतबाट हवाई जहाजमार्फत नेपाल ल्याउने गरिन्छ । तर, अहिले हवाई जहाज नचल्दा औषधि ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको डा. शाहले बताए ।
सडकमार्ग भएर औषधि ल्याउने भनिए पनि विभिन्न समस्याहरु आइरहेको औषधि वितरकहरू बताउँछन् । औषधि ब्यवसायी नन्दु पाण्डेले औषधि ल्याउन अवरोध नभए पनि क्यान्सरका बिरामी प्राथमिकतामा नपर्दा नआएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका सदस्यसमेत रहेका लोमस फार्मसिटिकल्सका सञ्चालक प्रज्जवजंग पाण्डेले नेपालमा जटिल रोगका औषधि उत्पादन नहुने हुँदा समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।
क्यान्सर रोगका बिरामीले खाने औषधि अभाव हुन थालेपछि उपचारमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन् । भर्ना भएका बिरामीहरुलाई पनि औषधि नपाउँदा त्यसै फर्काउनुपरेको क्यान्सर अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी विभागका प्रमुख डा. कृष्णसागर शर्माले बताए ।
उनले औषधिको स्टक सकिन थालेको र थप औषधि नपाउँदा निको हुने क्यान्सरका बिरामीसमेत प्रताडित बनेको बताए । अस्पतालकै ल्याबमा रिएजेन्टको समेत कमी हुन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।